धमला जोडीले अन्तरवार्तामै एक अर्कालाई कि,स गरेपछि; भिडियो भयो भाइरल (हेर्नुस भिडियो) – चितवन मिडिया
पत्रकार ऋषि धमलाले हिरोइनहरुको व्यक्तिगत कुरालाई लिएर अन्तर्वार्तामा सधैँजसो चा`सो दिने गर्छन् । उनै धमलाको श्रीमति पनि कलाकार हुन् । एलिजा गौतमसँग वैवाहिक जिवनमा बाँधिएका धमलाले आफ्नो श्रीम`तिले एक फिल्मलाई दिएको बे डसि न देखेर रि सा एका छन् । धमलाले एक अन्तर्वार्तामा पत्रकारसँग रि साउँ दै कलाकारले बे डसि न दिनु सामान्य भएको बताएका छन् ।
के भन्छन् धमला ?: प्रायः नेताहरुका अघिपछि दौ डिरहने पत्रकार ऋषि धमलालाई फिल्मप्रति खासै ल गाव थिएन । तर, श्रीमतीले नै रहर गरेपछि के लाग्यो ? श्रीमती एलिजा गौतमको रहर पुरा गर्न ऋ`षिले ‘अनुराग’ फिल्म निर्माण गरेका थिए। तर उक्त फिल्मले खासै सफलता भने हाँसील गर्न सकेन ।
अरुले जे भने पनि ऋषि स्वयम् भने श्रीमतीको डान्स देखेर दं ग छन् । ‘एलिजा`जीले जसरी डान्स देखाउनुभएको छ नी ?’ धमलाले भने, ‘आइ लाइक इट ।’ अरु हिरोइनहरुले छोटा लुगा लगाएको वि`षयमा ऋषिले आफ्नो कार्यक्रम धमलाको ह म लामा या ख्या ख्ति पार्ने गरेका छन् । आफ्नै श्रीमतीको छोटा लुगामा के भन्दा हुन् ? ‘परन अलिकति छोटो त भएको नै हो, र हामीबीच यस विषयमा कुराकानी पनि भएको थियो । तर, उहाँले कथाले नै मागे अनुसार यस्तो लुगा लगाउनु परेको भन्नुभएको छ । त्यसैले मेरो क म्प्ले न छैन,’ ऋषिले जवाफ दिए
कथाले माग्यो भने भोली बे ड सि न गर्न पनि स्वीकृति दिनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले क्लियर ज,वाफ दिएनन् । ऋषिलाई अर्को प्रश्न सोधियो, ‘आफ्नी श्रीमतीलाई अर्कैले अंगा लोमा बे रेर नचाएको देख्दा तपा`ईंलाई औ डा हा भएन ?’ उनले हाँस्दै जवाफ दिए, ‘यो सिनेमा जगत्को कुरा हो, वास्तविक जीवनमा त उहाँलाई मबाट कसैले खो सेर लानै सक्दैन नी ।’ अब प्रस्तुत छ भिडियो सामाग्री: highlights news